Macaashka laga helo adeegga bulshada oo laga doodayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Macaashka laga helo adeegga bulshada oo laga doodayo
Macaashka laga helo adeega bulshada
La daabacay onsdag 3 december 2014 kl 16.35
Hoggaamiyaha xisbiga bidixda Jonas Sjöstedt ayaa sheegay in meesha laga saari doono macaashka laga helo adeegyada bulshada. Dhinaca kale Ardalan Shekarabi oo ah wasiirka arrimaha bulshada oo ka tirsan xisbiga Socialdemoktratiska ayaa sheegay in aanay jirin sabab uu madaxa shirkadda
caafimaadka Capio ka welwelo isbeddelada lagu samaynayo macaashkaa adeegyada bulshada.
- Maya, maya, shirkadaha ka shaqeeya adeegyada bulshada ee ay tayadooda iyo horumarkoodu wanaagsan yihiin maaha in ay ka welwelaan arrintan. Taas cakiskeeda, waxa aanu rabnaa in aanu wada shaqayn dhaw la yeelanno shirkadaha gaarka loo leeyahay, ururrada sida mutadawacnimada u shaqeeya , si aanu u wadaajinno horumarka macaashka laga helo adeegyada bulshada.Waxa aanu doonaynaa in aanu samayno sharci wanaagsan oo kor u qaada tayahada adeegyada bulshada. Sidaasi daraadeed, shirkadaha sida wanaagsan u shaqeeya ee adeegyadoodu tayada leeyihiin maaha in ay ka welwelaan arrintan. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha bulshada Ardalan Shekarabi.
Dhexdhexaadintii dhexmartay wasiirka arrimaha bulshada iyo shirkada iska leh xarumaha caafimaadka ayaa waxa ka duwanaa hadaladii hoggaanka xisbiga bidixdu ka jeediyay shirkii lagu heshiiyay ee dayrkii dhacay. Waxaana hadalkiisii ka mid ahaa;
-Shirkadaha lacagaha badan haysta ee ganacsigoodu khamaarka yahay way ku adkaan doonaa mustaqbalka haddii meesha laga saaro macaashka laga helo adeegyada bulshada.
Doorashadii kadib xisbiga Vänsterpartiet waxa uu taageeradii uu dawladda cusub siiyay shuruud kaga dhigay in wax laga qabto macaashka laga helo adeegyada bulshada. Taasina waxa ay ahayd su’aal mihiim ah oo uu xisbigu doorashada ku galay, isagoo sidoo kale soo bandhigay 6 bishii oktoobar. Ujeeddada koowaadna waa sidii la heli lahaa macaash soo noqda oo dib loo geliyo adeegyada bulshada iyo in shirkadaha gaarka loo leeyahay laga qaado dulsaar yar.
Laakiinse waxa la sugayaa ka hor inta aanu heshiisku sharci isku beddelin. Qiimayn baa la samayn doonaa bilowga sannadka cusub, taasi oo la soo bandhigi doono gu’ga sannadka 2016. Waxaana aad looga hadli doonaa macaashka adeegyada bulshada iyo waliba shuruudaha ku xeeran kor u qaadiska iyo horumarinta tayada adeegyada ay shirkaduhu bixinayaan.
Marka hoggaanka xisbiga Socialdemokraterna la waydiiyo arrimaha macaashka, waxa ay markiiba ka hadlaan tayada adeegyada ay shirkadu bixiyaan. Haddii laga hadlo kor u qaadista tayada adeegyada shirkaduhuna waxa meesha ka baxaya macaashkii laga yarayn lahaa shirkadaha. Thomas Berglund oo madaxa shirkada adeegyada caafimaadka ee Capio ayaa sheegay in aanay wax dhib ah u keenayn in kor loo qaado tayada adeegyada ay shirkaduhu bixiyaan.
n Waxa ay u eeg tahay wax wanaagsan. Sidaasi daraadeed annaga iyo shirkadaha kale ee shaqadooda daacadda u ah wax dhib ah naguma keeni karto. In tayada shaqada kor loo qaadaa waxa ay horseedaa horumar.
Dad badan ayaa heshiiskan ku micneeyay mid xisbiga Vänsterpartiet uu guul weyn ka gaadhay iyo mid culays weyn saari doona shirkada maalgashiga khamaarka ah sameeyay. Laakiinse taas waxaanay wax welwel ah ku hayn Thomas Berglund oo ah agaasimaha ururrada isu tagay ee Capio. Waxaanu qabaa in heshiiskaasi ahaa mid ay dawladdu rabtay in ay xal u hesho su’aal taagnayd.
- Laakiin tani waa mid ka mid ah siyaasadda nolosha. Waxa ay atahy hab la rabay in miiska laga qaado su’aal taagnayd. Uma muuqato in ay noqon doonto mid wax xakamaynaysa.
Heshiiskii la gaadhay bishii oktoobar waxa uu ahaa mid siyaabo kale duwan loo turjuntay. Ha noqoto xitaa labada xisbi ee Socialdemorkaterna och Vänsterpartiet.
Xisbiga Vänsterpartiet waxa ay u tahay tallaabo ay hore ugu qaadeen arrinkii macaashka laga helo adeegyada bulshada ee ay danaynayeen. Tusaale ahaan marka laga hadlayo inta ay noqonayso dulsaarka ay shirkadu helayaan maaha mid cad. Waxa ay u eeg tahay in ay noqon doonto tiro u dhaxaysa 1-4%. Wasiirka arrimaha bulshada Ardalan Shekarabi ayaan isugu jawaab cad ka bixin su’aashan. Mar la waydiiyay. Mar la waydiiyay inte boqole ee ay noqonayso waxa uu yidhi,
- Ma jiro heshiis ah oo laga gaadhay inta boqole ee ay noqonayso.
Mar kale ayaa la waydiiyay haddii ba jirto in xisbiga Vänsterpartiet yahay mid isagu jeebkiisa uun kala soo baxay tirada boqolayda ah ee uu dulsaarku noqon doono. Waxa uu ku jawaabay.
- Heshiisku waxa uu u eeg yahay in macaashka ka soo noqda shirkada dib loogu celiyo oo wax loogu qabto isla . Laakiin sidoo kale shirkaduhu xaqbay u leeyihiin in ay dulsaar yar saartaan.